Klopp oo si xiiso leh kaga hadlay ku guuleysigooda Premier League, kaddib shir jaraa’id uu ka soo muuqday – Gool FM
(Liverpool) 26 Juun 2020. Tababaraha reer Germany iyo kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id oo maanta ka dhacay garoonka Anfield, kaasoo ay ka soo qeyb galeen saxaafada, si loogu dabaal-dego ku guuleysigooda horyaalka Premier League.
Liverpool ayaa si rasmi ah ugu guuleysatay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan 2019/2020, waana markii 19-aad ee taariikhdeeda, kaddib markii ay xalay Manchester City guuldarro kala kulantay kooxda Chelsea.
Haddaba Jürgen Klopp ayaa wuxuu ugu horeyn hadalkiisa ku bilaabay:
“Waan faraxsanahay, runtii waan faraxsanahay waxaan ku noolahay waqtiyo aad u weyn, waxa ay ciyaartoyda sameeyeen waa wax la yaab leh, waa sida safar cajiib ah”.
“Ciyaartoyda waxay go’aansadeen inay qortaan taariikh iyaga gaar u ah, weyna ku guuleysteen inay sidaas sameeyaan, mana dhici lahayn arrintan haddii aysan joogi laheyn isla markaana qaban laheyn shaqadan”.
“Waxaan qaab wanaagsan ku jirnay 4 sano ka hor, si ka wanaagsan sidii hore 3 sano ka hor, xilli ciyaareedkii la soo dhaafay waan fiicneyn, xilli ciyaareedkan waxaan ku jirnay xaalad aan caadi aheyn”.
“Xaqiiqdii way adag tahay in lagu guuleysto koob, laakiin shaqada ay qabteen ciyaartoyda waa mid aad u fiican, waxayna runtii u qalmaan waxa ay gaareen” ayuu yiri tababare Jürgen Klopp.